संस्कृति समयअनुसार परिमार्जन र विकसित गर्न सकिन्छ! « Media for all across the globe
संस्कृति समयअनुसार परिमार्जन र विकसित गर्न सकिन्छ!
नेपाली नारीहरुको मान, सम्मान र पहिचानका लागि सास्कृतिक पर्व एक एतिहासिक दिन हरीतालिका तीज नेपालमा हिन्दु परम्परा अनुसार भगवान शिव र देवी पार्वतीको पुनर्मिलनको उपलक्ष्यमा यो पर्व देशभरि हर्ष उल्लासका साथ मनाइन्छ।
भाग्यमानी महिलाहरूले हरितालिका तीजको उपवास गरी उनीहरूको सुहाग अखण्ड र अविवाहित या विवाहित महिला दिदि बहिनिहरुले सर्वप्रथम, यो उपवास माता पार्वतीले भगवान शिवशंकरको लागि राखेका थिए। यस दिन गौरी-शंकरको विशेष पूजा गरिन्छ। यस दिन उपवास बसेकी महिलाहरू सूर्योदय भन्दा पहिले उठ्छिन् र नुहाए पछि नया कपडा फेरीन्छ। केरा पातहरू सहित मंडप बनाएर पूजाका लागि गौरी-शंकरको मूर्ति स्थापना गरिन्छ। यससँगै, पार्वती जीलाई सुहागका सबै वस्तुहरू प्रदान गरिन्छ। भजन, कीर्तनहरू दिन भर जागृत हुन्छन् र शिव पार्वती विवाहको कथा सुनाइन्छ।
संस्कृति र धर्म यी दुईबीच नजिकको सम्बन्ध छ वा धर्मभिरूहरूले महिला र उत्पीडितमाथि शासन गर्न अनगिन्ती कथ्य बनाएका छन्। संस्कृति समयअनुसार परिमार्जन र विकसित गर्न सकिन्छ। संस्कृति मानव समाजको चिन्तन र हुर्काइ हो, तर सबै धर्म र संस्कृतिमा महिनावारीलाई लिएर कुनै न कुनै भ्रम छ। महिनावारी भएका वेला महिला अपवित्र र अछुत हुन्छन् भन्ने मान्यताले काम गरेको देखिन्छ।
अध्ययनअनुसार हिन्दू समाजका महिला आफ्नो जीवनकालभरि तीन हजार दिन अछुतका रूपमा रहन बाध्य छन् भने धेरै वर्ष सम्म पौष्टिक आहारबाट पनि वञ्चित हुन्छन्। हिन्दू महिला हरेक महिना महिनावारीको बेला पाँच देखि सात दिन निजी र सार्वजनिक स्थानमा बहिष्कृत हुन्छन्, जुन दुव्र्यवहारले उनीहरूलाई मर्यादित जीवनको अधिकारबाट ठाडै वञ्चित गर्छ। हिन्दू महिलालाई गरिने यस्ता विभेदकारी बन्देज अन्य समुदायका महिलालाई पनि भोग्न बाध्य पारिएको छ।
नारीलाइ नारीकै आखाले हेर्नू र नारीको अस्तित्वको सम्मान गरिनु पर्छ भन्ने सन्देशका साथ हरितालिका तीज मनाइन्छ। जबसम्म समाजमा बिदयमा रहेका अन्धबिस्वास कुरितीहरुको अन्त हुदैन तबसम्म समाजमा नारीहरुले दु:खद भोग्न बादय रहिरहन्छन। तेसैले सबैले आजै प्रण गरी दहेज प्रथा छाउपडि प्रथा, बोक्सी प्रथा, महिला हिन्सा हत्या, बलात्कार, चेली बेचबिखन आदि यस्ता कुरुतीहरुको बिरुद्ध एक जुट भइ सबै महिला दिदि बहिनि अगाडी आयर यस्ता प्रथाहरुको अन्त गरौ अनि मात्रै हरितालिका दिवसको सहि तात्पर्य हुन्छ र नारी प्रती सहि सम्मान हुन्छ। तसर्थ अब आगामी दिनहरुमा सम्पूर्ण महिला दिदिबहिनि हरुले आफ्नो अधिकारका साथै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै अगाडी बढ्नु नै आज को आवशकता हो।
प्रगतिशिल नेपाली समाज-भारत